म्यासेजको जवाफ नदिँदा सम्बन्ध विच्छेद !
Tuesday, 18 Jul, 2017 8:39 AM
के तपाईले पनि आफ्नो श्रीमान वा श्रीमतीले पठाएको म्यासेजलाई नजरअन्दाज गर्नुभएको छ ? जवाफ यदि ‘गरेको छु’ हो भने सावधान हुनुस्, तपाई समस्यामा पनि पर्न सक्नु हुनेछ ।
ताइवानमा एउटी महिलाले आफ्नो श्रीमानसँग यसकारण सम्बन्ध विच्छेद गरिन् कि श्रीमानले उनको सन्देशको रिप्लाई गर्दैन थिए । अदालतमा उनले म्यासेजिङ ऐप ‘लाइन’ मा पठाइएका सन्देशहरु पनि देखाइन् ।
ऐपमा महिलाका श्रीमानले टेक्स्ट म्यासेज पढेका थिए । तर, त्यसको कुनै उत्तर दिएका थिएनन् । यो देखेपछि न्यायाधीशले महिलाको पक्षमा फैसला सुनाए ।
कुनै सन्देश पढेर उत्तर नदिनुलाई ‘ब्लु टिकिंग’ नाम दिइएको छ । यो कन्सेप्ट ह्वाट्सऐप र लाइनजस्ता सामाजिक सञ्जाल ऐपबाट आएको हो ।
पारिवारिक अदालतमा न्यायाधीशले महिलाका तर्फबाट प्रमाणका रुपमा प्रस्तुत गरिएको सन्देशलाई आधार बनाएर फैसला सनाए । न्यायाधीशले भने, पीडितलाई नजरअन्दाज गरिएको छ, यस्तो अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेदको स्वीकृति दिन सकिन्छ ।
अस्पतालमा थिइन् श्रीमती
न्यायाधीशले भने, ६ महिनासम्म पीडितले आफ्नो श्रीमानलाई म्यासेज गरिन् तर कुनै जवाफ आएन । त्यसमध्ये एउटा म्यासेज कार दुर्घटनामा परेका कारण आफू अस्पभालमा भर्ना भएको भन्ने पनि थियो ।
एउटा अर्को म्यासेजमा उनले आफ्नो श्रीमानलाई आफू एमरजेन्सी कक्षमा छु भनेकी छन् । तैपनि उनका श्रीमानले म्यासेज पढेर पनि कुनै उत्तर दिएका छैनन् ।
यद्यपि उनका श्रीमानले एकपटक अस्पताल आएर अवस्था बुझे । तर, न्यायाधीशले म्यासेजको उत्तर नदिएको विषयलाई आधार बनाएर सम्बन्ध विच्छेदको अनुमति दिए ।
उनीहरुको विवाह सन् २०१२ मा भएको थियो । महिलाको उमेर करिब ५० वर्षको छ भने पुरुषको उमेर ४० वर्ष वरपर रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन् । एजेन्सी